Fatịlaịza n'ihi ogwu ubi containers - China Qingdao King Good New Materials
Herbs toro na containers ga-achọ ihe fatịlaịza karịa ndị toro n'ogige. Nke ahụ bụ n'ihi na ha enweghị ụzọ juputa nri ha na-eji dị ka ha na-eto. Ma echegbula, ị na-adịghị ịzụta ihe ọ bụla fancy fatịlaịza kpọmkwem maka gị containers, i nwere ike iji otu fatịlaịza n'ihi ogwu na ubi gị containers kwa! My n'elu ikwu maka ngwa ngwa ntọhapụ organic fatịlaịza maka herbs toro na containers na-Healthy Too organic ogwu fatịlaịza ma Sustane niile eke osisi nri.
Njikọ Post: A akpa ubi cheat mpempe akwụkwọ
N'ihi na containers, ọ bụ ezi echiche iji tinye ngwa ngwa ntọhapụ organic fatịlaịza nsogbu dị iche iche n'ime akpa, nakwa dị ka eji a mmiri soluble fatịlaịza ofụri na-eto eto oge. Ị nwere ike tinye a ngwa ngwa ntọhapụ organic ogwu ubi fatịlaịza n'ime ala n'ihu akuku gị herbs, ma ọ bụ i nwere ike efesa nsogbu dị iche iche n'elu ala na ọkọ ya n'ime ájá mgbe akuku
n adianade nwayọọ ntọhapụ nsogbu dị iche iche, ị nwere ike na-eji mmiri soluble fatịlaịza gị containers ofụri na-eto eto oge na-gị na herbs na-eto eto ike. Mmiri soluble fatịlaịza dị ukwuu maka inye gị herbs a ngwa ngwa agbam ume nke nri, ma, ha na-eji elu (ma ọ bụ na-asa nke ite) ngwa ngwa otú ha mkpa ha na-etinyere ọzọ mgbe.
Njikọ Post: 5 Atụmatụ na-eto eto ibu na-ede ede
My mmasị ụdị mmiri soluble fatịlaịza n'ihi ogwu na ubi na-azụ emulsion na compost tii. Ma nke ndị a organic fatịlaịza arụ ọrụ dị ukwuu na-akpa ogwu na ubi na-eto eto ike niile n'oge okpomọkụ. Ma unu adịghị mkpa ka nsogbu oge ukwuu n'elu udia gị akpa toro herbs na a mgbe oge, otú echegbula ma ọ bụrụ na ị na-echefu a nzọụkwụ.
Herbs toro na containers ga-mkpa ọzọ na-elekọta ma fatịlaịza karịa herbs toro n'ogige. Ma iji fatịlaịza n'ihi ogwu na ubi na containers dị mfe, karịsịa ma ọ bụrụ na ị na-amalite na ọgaranya, organic ala na iji eke nri.